Fomba fanao SEO tsara indrindra amin'ny pejy 2013: Fitsipika 7 amin'ny lalao | Martech Zone
Alakamisy Febroary 14, 2013 Alakamisy Febroary 14, 2013 Jayson DeMers
Amin'izao fotoana izao, azoko antoka fa efa henonao ny momba ny fanatsarana eo amin'ny pejy haharitra mandritra ny androm-piainany. Tsy te hamerina ireo mantra henoko efa henonao hatramin'ny taona lasa aho. Eny, ny SEO eo amin'ny pejy dia nanjary zava-dehibe kokoa (tsy tadidiko mihitsy ny fotoana tsy nilana izany), ary eny, ny SEO eo amin'ny pejy dia afaka manimba na manaparitaka ny vintana azonao amin'ny toerana ambony amin'ny Google SERPs. Fa ny niova dia ny fomba fahitantsika sy ny fitondrantsika ny SEO eo amin'ny pejy.
Ny ankamaroan'ny SEO dia mihevitra ny fanatsarana eo amin'ny pejy ho toy ny fidiran'ny kaody teknika manokana. Fantatrao ny fandavahana: meta tags, URL canonical, alt tags, encoding mety, marika lohateny voafetra voafaritra tsara, voafetra toetra, sns.
Ireo no fototra. Ary amin'izao fotoana izao dia sekoly efa antitra tokoa izy ireo. Manohy miseho eo amin'ny lisitra SEO eo amin'ny pejy izy ireo, fa izaho sy ianao kosa mahalala fa ny demografika manontolo an'ny SEO dia niova be, na dia mbola nijanona aza ny foto-kevitra fototra. Noho io fiovana io, ny fomba fahitanao ny SEO eo amin'ny pejy dia mila manitsy ihany koa. Izay no hojerentsika izao.
Ao amin'ny pejy SEO: The Foundation
Raha tsy voatsara tsara eo amin'ny pejy ny tranonkalanao, ny ezaka ataonao hiala amin'ny tranokala (fananganana rohy, marketing amin'ny atiny, media sosialy) dia mety tsy hitondra valiny lehibe. Tsy hoe tsy hiteraka na inona na inona mihitsy izy ireo, fa mihoatra ny antsasaky ny ezaka ataonao dia mety hiafara amin'ny fidinana any anaty tatatra.
Tsy misy boky mifehy mazava milaza hoe: ataovy X, Y, ary Z amin'ny fanatsarana eo amin'ny pejy ary hiakatra A, B, na C. Ny fanatsarana ny pejy dia miankina amin'ny fitsapana. Analytics ary lesoka. Hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao amin'ny alàlan'ny fahitana izay tsy mandeha noho izay tsy mandeha.
Fa ny zavatra rehetra tsy tokony ho adino dia misy izao: Raha tsy mitandrina ny SEO eo amin'ny pejy ianao dia mety ho lavo na hijanona ao aoriana: amin'ny laharana, amin'ny fiovam-po, ary amin'ny ROI.
Fa maninona no mitebiteby?
Fa alao aloha hamafana ity iray ity: Maninona no mitebiteby momba ny SEO eo amin'ny pejy? Inona moa fa efa misy fitaovana iray taonina momba azy io. Manam-pahaizana maro no nanoratra tsara momba izany.
Ny fiovan'ny demografikan'ny algorithman ny motera dia nanova ireo antony nahatonga ny safidin'ny olona hanao SEO. Tsy afaka mieritreritra momba ny teny lakile sy rohy miditra fotsiny ianao. Toy izany koa, tsy afaka mieritreritra intsony momba ny mari-pamantarana meta sy alt fotsiny ianao (eny, io koa dia ahitana ny tag ny lohateny).
Ny SEO eo amin'ny pejy dia tsy hoe momba ny fehezan-kaody fotsiny. Izy io koa dia momba ny fijerin'ny tranokalanao fa taolana tsy mitanjaka (ny fomba fijerin'ny robot), ary ny fandraisan'ny tranonkalanao ny efijery samihafa. Anisan'izany ny ora sy ny fahefana. Ary miaraka amin'ny torolàlana izay itarihan'i Google ny taona 2013 sy ny sisa, dia mazava fa ny singa ao amin'ny pejy sy ny singa ivelan'ny pejy dia tsy maintsy milahatra ary mifanaraka amin'ny fomba voajanahary, mazava, voajanahary. Izany no antony ilantsika hanombatombana tsara kokoa momba ny SEO eo amin'ny pejy.
1. Meta Tags dia vao fanombohana
Fantatray ary nampiasa meta tags hatramin'ny nahatongavan'izy ireo. Ny meta tag "keyword" dia efa ela, toy ny laharana SEO, saingy hafanana be no nateraka tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fampiasana ireo tag famaritana meta avy amin'ny fomba fijery SEO.
Ny tena manan-danja kokoa noho ny filaharana SEO, dia ny fisian'ireo mari-pamantarana meta manome fotoana mety hisy fiantraikany amin'ny fomba isehoan'ny tranonkalanao amin'ny valin'ny fikarohana. Ny tag famaritana meta tsara dia azonao atao ny manindry ny valiny alohan'ny filaharan'ny lehilahy amboninao. Mbola fomba fanao tsara ny mampiasa teny lakile raha azonao atao, miaraka amin'ny mpamaritra jeografika (rehefa azo ampiharina), fa ny voalohany indrindra dia tokony ho fikasana hisarika ny tsindry avy amin'ny olona.
2. Canonical, Duplicate, Broken Links, sns.
Ny robot Google dia nanjary marani-tsaina tokoa, hatramin'ny nahatonga ny rohy tapaka sy ny pejy miakatra mampiakatra saina mena haingana kokoa noho ny bala. Izany indrindra no antony hahitanao ny rohy kanônika (sy ny kaody mifandraika amin'izany) tena zava-dehibe.
Ny rohy tapaka sy ny dupes dia tsy fanoherana ny SEO fotsiny. Anti-mpampiasa koa izy ireo. Inona ny fihetsika voalohany nataonao rehefa tsindrio ny rohy iray izay mampiseho fotsiny ny lesoka pejy?
3. Ny fomba fijerin'ny Robot
Ny lahatsoratra dia mijanona ho ampahany manandanja indrindra amin'ny tranokala na dia ankehitriny aza. Na dia manome laharana horonan-tsary sy haino aman-jery sasantsasany avo kokoa noho ny sasany aza i Google, ho an'ny teny lakile sasany, ny tranokala manana endrika tsara sy manan-karena kosa dia mbola manjaka hatrany.
Na dia tsy marina tanteraka aza, ny valiny dia toa ny fahitan'ny tranonkalanao ilay crawler. Ankehitriny, hamarino ireo entana rehetra ao amin'ity lisitra manaraka ity:
Miseho ho soratra ve ny sary famantarana anao?
Miasa tsara ve ny fitetezana? Tapaka ve izany?
Miseho eo aorian'ny fitetezana ve ny atiny lehibe amin'ny pejinao?
Misy singa miafina miseho ve rehefa tsy mandeha ny JS?
Voalamina tsara ve ny atiny?
Miseho avokoa ve ny sombin-pejy rehetra (doka, sary banner, endrika fisoratana anarana, rohy sns) aorian'ny atiny lehibe?
Ny hevitra fototra dia ny hahazoana antoka fa ny atiny lehibe (ny ampahany tianao homarihin'i Google) dia tonga faran'izay haingana miaraka amin'ireo lohateny sy famaritana mifandraika.
4. Tombana sy habe amin'ny fotoana fampidinana azy
Google dia efa nanamarika hatrizay ny habeny sy ny salan'isan'ny fe-potoana entan'ny pejy. Izany dia miditra amin'ny algorithm misy laharana amin'ny isa rehetra ary misy fiantraikany amin'ny toerana misy anao ao amin'ny SERPs. Midika izany fa afaka manana atiny tsara ianao ao amin'ny tranonkalanao, fa raha miakatra miadana ny pejy dia ho mailo i Google amin'ny fanondroana anao ambony noho ireo tranonkala hafa izay mavesatra haingana kokoa.
5. Mieritrereta finday, mieritreritra mamaly
Ity dia iray amin'ireo lohahevitra resahana indrindra amin'ny varotra an-tserasera ankehitriny. Manomboka amin'ny doka finday sy ny fikarohana eo an-toerana ka hatramin'ny fironana amin'ny tsena amin'ny fanjifana birao / takelaka, mazava fa mihodina mankany a tranokala voavolavola finday no onja amin'ny ho avy.
Rehefa mieritreritra tranokala finday / mamaly ianao, ahoana no fomba hanaovanao izany? Mivaly toa ny amin'ny fangatahana haino aman-jery CSS, na domains vaovao toa ny “m.domain.com”? Ny voalohany dia atolotra matetika satria io dia mitazona ny zavatra ao amin'ny sehatra iray ihany (ranom-pifandraisana, tsy misy kopia sns.). Mitazona ny zavatra ho tsotra kokoa izy io.
6. Fahefana & MpanoratraRank
Nahazo fifanarahana vaovao amin'ny fiainana miaraka amin'ny Google izay mampiroborobo ny MpanoratraRank mimetatra. Somary sarotra kokoa noho io izao, na izany aza. Tsy maintsy mamela ny sombin-javatra manan-karena amin'ny tranokalanao ianao, alao antoka fa feno ny profil Google+ anao ary ampifandraiso amin'ny bilaoginao / tranokalanao. Ny mpanoratraRank dia nipoitra ho metrika tena lehibe sy azo tsapain-tanana izay misy fiatraikany amin'ny laharam-pejy, ary iray amin'ireo tetika SEO eo amin'ny pejy tokony hataonao. Tsy hanatsara ny laharam-pahamehanao fotsiny izy io, fa hanatsara ny tahan'ny tsindry bokotrao amin'ny SERPs ihany koa.
7. Ny famolavolana dia tsy tokony ho ny zavatra farany amin'ny lisitrao
Mampihomehy, tsy maintsy nanoratra momba an'io ho farany aho satria maro ny olona no mahatadidy ny zavatra farany novakiany tao anaty lahatsoratra iray. Tsy mijery ny maha-zava-dehibe ny famolavolana ireo olona SEO mafy loha.
Ny estetika sy ny fahaiza-mamaky teny dia miainga avy amin'ny famolavolana tranonkala iray. Google dia mahay mamantatra izay mampiseho "ambonin'ny vala" amin'ny tranokala, ary mamporisika mazava tsara i Google fa apetraho eo ambonin'ilay vala ny votoatiny mba hikaroham-baovao ireo mpamaky anao fa tsy doka.
Ny SEO eo amin'ny pejy dia tsy momba ny kaody meta sy ny URL canonical fotsiny. Momba ny fifandraisan'ny tranokalanao amin'ny mpampiasa sy ilay robot. Izy io dia momba ny fomba ahazoanao antoka fa azo idirana sy azo vakiana ny tranokalanao, ary mbola manana fampahalalana ampy eo ambanin'ny sarona ahafahan'ny motera fikarohana mandray mora foana.
Tags: eo amin'ny pejy Seoeo an-toerana seoeo an-toerana seofikarohana OptimizationSEO